IIT Mandi - Yekuzvionera Hosha Kuonekwa MuMbatatisi Zvirimwa - Potatoes News
IIT Mandi - otomatiki hutachiona hutachiona muzvirimwa zvembatatisi
Mandi: Masayendisiti kubva kuIndia Institute of Technology (IIT) Mandi, vagadzira komputa yekuenzanisira yekuzvionera chirwere muzvirimwa zvembatatisi vachishandisa mifananidzo yemashizha ayo.
Tsvagurudzo yakatungamirwa naDr.Srikant Srinivasan, Associate Professor, Chikoro cheKomputa uye Magetsi Injiniya, IIT Mandi, mukubatana neCentral Potato Research Institute, Shimla, inoshandisa hunyanzvi hweArtificial Intelligence (AI) kuratidza zvikamu zvinorwara zveshizha.
Inobhadharwa neDhipatimendi reBiotechnology, Govt. yeIndia, mhedzisiro yetsvagurudzo iyi ichangobva kuburitswa mupepanhau rePlant Phenomics, mune pepa rakanyorwa pamwe naDr.Srikant Srinivasan, naDr Shyam K. Masakapalli pamwe nevakadzidza vezvekutsvagisa, VaJoe Johnson, naMnu. Geetanjali Sharma, anobva kuIIT Mandi, naDkt Vijay Kumar Dua, Dr. Sanjeev Sharma, naDr Jagdev Sharma, vanobva kuCentral Potato Research Institute, Shimla.
Mbatatisi, munhoroondo yepasi rose, ndiyo yakakonzera nzara huru pasi rose yepakati pezana regumi nemapfumbamwe century iyo yakauraya vanhu vanopfuura miriyoni muIreland uye yakaridza rufu rwechiIrish. Chikonzero? Mbatata Blight.
Iyo Blight chirwere chakajairika chemuti wembatatisi, icho chinotanga seisina kuenzana mwenje girini maronda padhuze netipi uye kumahombekombe kweshizha uye ndokuzopararira kuita bhuru rakakura kuita purplish-nhema nhema necrotic zvigamba izvo zvinopedzisira zvinotungamira mukuwora kwemuti. Kana ikasiiwa isingaonekwe uye isina kuongororwa, blight inogona kuparadza chirimwa chose mukati mevhiki pasi pemamiriro ezvinhu akanaka.
"MuIndia, sekune dzimwe nyika zhinji dzichiri kusimukira, kuwanikwa uye kuzivikanwa kwedambudziko kunoitwa nemaoko nevashandi vakarovedzwa vanoongorora munda uye nekuona vachiongorora mashizha emuti wembatatisi," akatsanangura Dr. Srinivasan. Maitiro aya, sezvakatarisirwa, anonetesa uye kazhinji haashande, kunyanya kunzvimbo dziri kure, nekuti zvinoda hunyanzvi hwenyanzvi yekurima iyo inogona kunge isingawanikwe.
"Kuongorora chirwere kwakazvimirira kunogona kubatsira mune izvi uye nekupihwa kuwanda kwemafoni munyika, foni inogona kunge iri chinhu chakakosha panyaya iyi," vakadaro VaJoe Johnson, Research Scholar, IIT Mandi, vachiratidza kushanda kushandiswa kwekutsvaga kwake. Iwo epamberi HD makamera, zvirinani komputa simba uye nzira dzekutaurirana dzinopihwa nharembozha dzinopa chikuva chinovimbisa chekuongorora hutachiona hwezvirimwa muzvirimwa, izvo zvinogona kuchengetedza nguva uye kubatsira mukutungamira kwenguva pfupi kwezvirwere, mune zviitiko zvekuputika.
Iyo computational chishandiso chakagadzirwa neIIT Mandi masayendisiti anokwanisa kuona blight mumazamu mashizha emifananidzo. Iyo modhi inovakwa ichishandisa AI chishandiso chinonzi mask nharaunda-yakavakirwa convolutional neural network yekuvakisa uye inogona kunyatso kujekesa iyo inorwara zvikamu zveshizha pakati peyakaomarara kumashure kwezvirimwa uye ivhu nyaya.
Kuti ugadzire yakasimba mhando, data rine hutano uye rakashama remashizha rakaunganidzwa kubva kuminda kuyambuka Punjab, UP uye Himachal Pradesh. Izvo zvaive zvakakosha kuti iyo modhi yakavandudzwa inofanirwa kuve inotakurika pasirese.
"Kuongorora kwekuonekwa kwekuita kunoratidza kunyatsojeka kwe98% pamifananidzo yemashizha munzvimbo dzesango," akadaro Dr Srinivasan.
Kunyangwe hazvo mbatatisi isiri chikafu chekudya mumatunhu mazhinji epasi, chirimwa chemari, uye kukundikana kwacho kunogona kuva nemhedzisiro ine njodzi, kunyanya kuvarimi vane minda yekumicheto. Nekudaro, kuona kwekutanga kwechirwere kwakakosha kudzivirira njodzi yemari kumurimi uye nehupfumi hwenyika.
Kutevera budiriro iyi, timu iri kudzikisira modhi kune mashoma makumi emamigabhayeti kuitira kuti igone kuitirwa pane smartphone sekushandisa. Naizvozvi, apo murimi paachafotora shizha rinoita serisina hutano, iko kunyorera kuchasimbisa munguva chaiyo kana iro shizha rine hutachiona kana kwete. Neruzivo urwu rwakakodzera nguva, murimi aizoziva nguva chaiyo yekumwaya munda, achichengetedza goho rake uye achideredza mitengo inosanganisirwa nekushandisa zvisina kufanira fungicides
"Muenzaniso urikucheneswa sezvo mamwe matunhu akafukidzwa," akawedzera Dr. Srinivasan akasimbisa kuti ichaendeswa sechikamu che MurimiZone app iyo ichave ichiwanikwa kune mbatatisi varimi mahara.
IIT Mandi Inoratidza Iyo Nzira Yekuona Zvirwere MuPatato Zvirimwa Uchishandisa Mufananidzo Wayo Mashizha Awo
Tags: KUDzivirirakurapa chirwerehosha dzembatatisi kana huremaakangwara zvekurima
Indian Institute inopa Model Yekutarisa Kunonoka Blight MuPatato Zvirimwa Uchishandisa Mufananidzo Wayo Mashizha
Kugadziriswa kwehurongwa hwechikafu kunovimba ne "hama dzemusango" dzembatatisi
Aeres University yeApplied Sayenzi inoedza kubereka mu mbatatisi
Mushonga wakasarudzika kubva kuzvipembenene zvinokuvadza wakagadzirwa muRussia
Mavhidhiyo anotaura nyaya nezve kurimwa kwembatatari mune ramangwana
Nguva yakakosha kudzora masora pakati pekudyara mbatatisi, kuvharwa kwemitsara
Cape Cod Potato Chips kuwedzera mukubata apo Campbell anoongorora ese makuru mapurojekiti